Barnaamij lagu soo bandhigayo "waxyaabo lala fajacay" oo ku saabsan Michael Jackson - BBC News Somali
Image caption Jackson ayaa loo yaqaannay boqorka qoob ka ciyaarka iyo heesaha Pop-ka
"Kani waa barnaamij kale oo laga naxo isla markaana caro dhalinaya, waxaana looga gol leeyahay in lagu sumcad dilo fannaanka oo lacagna lagu helo sababta Michael Jackson", ayaa lagu yiri bayaankaas.
Aretha Franklin, 'Boqoraddii heesaha Soul' oo geeriyootay
Fanaanka 50 Cent oo difaacay R. Kelly
Pharrell : Trump heesteyda Happy ha ii dhaafo
2 nin oo kasoo muuqday filimka laga sameeyay barnaamijkaas ayaa sheegay in iyagoo ay da'dooda kala tahay 7 jir iyo 10 jir uu Jackson la saaxiibay qoysaskooda.
Hadda oo ay da'dooda tahay 30-meeyo sano ayey ku eedeeyeen heesaaga dhintay inuu xad gudubyo galmo ku sameeyay.
Booliska ayaa weerar ku qaaday xarunta Michael Jackson ee gobolka California - sida lagu xusay mid ka mid ah ciwaannada barnaamijka oo qeexay in Jackson uu sannadkii 2003-dii tacaddi galmo u geystay wiil 13 sano jir ah.
Image caption Jackson wuxuu geeriyooday 2009-kii, isagoo markaas 50 jir ahaa
Mas'uuliyiinta Channel 4 ayaa BBC-da u sheegay in filimku uu "ahaa mid waddada ku soo jiray muddo dhowr sano ah".
Michael Jackson ayaa geeriyooday 25-kii bishii Juunyo ee sannadkii 2009-kii, isagoo markaas ay da'diisu ahayd 50 sano.